पशुपन्छीलाई कस्तो आहार खुवाइरहेका छौं ? – NewsAgro.com
पशुपन्छीलाई कस्तो आहार खुवाइरहेका छौं ?
July 25, 2018 July 25, 2018 newsagro0Comments केन्द्रीय गाईभैँसी कार्यालय, पत्रकार, पशु अन्वेषण प्रयोगशाला, पशु उत्पादन निर्देशनालय, पशुपन्छी मन्त्रालय, पशुपन्छीलाई कस्तो आहार खुवाइरहेका छौं ?, पशुसेवा विभाग
यो समाचार 457 पटक पढिएको
• जनकबहादुर धामी / हामीले भर्खरै पशुपन्छी मन्त्रालय, पशुसेवा विभाग, पशु उत्पादन निर्देशनालय, केन्द्रीय गाईभैँसी कार्यालय, पशु अन्वेषण प्रयोगशाला, पत्रकारलगायतको टोलीले चितवन र मकवानपुरका केही दाना उद्योगहरूको अनुगमन गर्यौं । त्यसक्रममा देखिएका कमीकमजोरी सुधार्न हामीले सुझाव पनि दिएका छौं । यसले दाना उद्योगीहरूलाई सचेत गराएको छ । आगामी दिनमा अनुगमनलाई बढाउनेसँगै निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।
उद्योगी तथा व्यवसायीको हिसाबले पनि सबैभन्दा टड्कारो आवश्यकता पनि यही हो । तर, राज्य यसलाई बुझ्न सकेको छैन । त्यति मात्र होइन, उद्योगी तथा व्यापारीले पनि यो बुझ्न सकेका छैनन् । भेटेरिनरी क्षेत्रमा काम गर्नेले पनि यसबारे बुझेका छैनन् । भेटेरिनरीका मान्छेले सुई हान्ने अथवा उपचार गर्ने मात्रै बुझे ।
पशुपन्छी मन्त्रालय स्थापना भएलगत्तै पशुपन्छी उत्पादन दुध, फुल, मासुमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम ल्याइएको छ । ४० बुँदे प्रतिबद्धता पनि गरियो । र, यो मन्त्रालयलाई किसानको साथीको रूपमा अघि बढ्छौं भन्ने हिसावकितावमा पनि अगाडि बढियो । तर, विडम्बना के हो भने जुन हिसावले पशुपन्छी विकास मन्त्रालय स्थापना भयो त्यो हिसावमा फड्को मार्न सकेनौं ।
अहिले अन्य मन्त्रालयहरु समेत मर्ज भएर कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय (पशुपन्छी विकास) रहेको छ । यसमा अलि धिमा गतिमा अघि बढ्यौं भन्ने बुझाइ पनि छ । दुध, फुल मासु उत्पादन गर्दा सबैभन्दा पहिले ति उत्पादन गर्ने वस्तुहरू त हुनुपर्यो । दुध उत्पादन गर्न गाईभैँसी वा बाख्रा हुनुपर्यो । मासु उत्पादन गर्न कुखुरा, भैँसी, बंगुर, भेडा–बाख्रा हुनुपर्यो । अण्डाका लागि कुखुरा हुनुपर्यो । तर, पशुपन्छी भएर मात्रै उत्पादन बढ्ने होइन । यसमा पशुपन्छीलाई खुवाउने दानाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । दाना स्वस्थकर छ कि छैन ? यसमा ध्यान पुर्याउनु जरुरी हुन्छ । तर, यसमा न राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छ न त दाना उत्पादक व्यावसायीको । पशुपालक किसानले पनि यसमा ध्यान पुर्याउन सकेका छैनन् ।
खर्बौंको कारोबार गर्ने कुखुरा व्यावसायी दानाबाट पीडित छन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ । कतिपय त गुणस्तरहीन दानाले कुखुरा मरेको भन्ने गुनासा समेत लिएर आउने गरेका छन् । कुखुरापालकले ल्याएका नमुना परीक्षण गर्दा त्यस्तै देखिन्छ । पशुपन्छीलाई गुणस्तरीय दाना खुवाए मात्रै त्यसको उत्पादन गुणस्तरीय हुन्छ ।
गुणस्तरीय (पोषिलो) दाना खाएको पशुपन्छीहरूको उत्पादन गुणस्तरीय हुन्छ । एन्टिबायोटिक र टक्सिन मिसिएको दाना खाने पशुपन्छीबाट उत्पादित वस्तुमा त्यो सरेर आउँछ । र, त्यो वस्तु उपभोग गर्नेलाई विभिन्न रोगहरू निम्तन सक्ने अवस्था हुन्छ ।
मासु उपभोग गर्नेले मासु स्वस्थ छरछैन भनेर खोज्छौं । तर, मासु उत्पादन गर्ने पशुपन्छी गुणस्तरीय छरछैन भनेर चासो दिँदैनौं । पशुपन्छी स्वस्थ हुन त्यसले स्वस्थकर दाना खाएको छ कि छैन भन्ने ध्यान दिनुपर्छ । अनि मात्रै त्यसको उत्पादन स्वस्थ हुन्छ ।
त्यसैले सात वटै प्रदेशमा लाइभष्टक गुणस्तर प्रयोगशाला हुनुपर्छ । गुणस्तरीय दाना भएन भने सबै क्षेत्रलाई त्यसको असर पर्छ । पहिलो दाना व्यावसायीलाई नै असर पर्छ । किनकि पशुपालक किसानले किनेको कुनै दानाले पशुमा राम्रो प्रभाव देखिएन भने दोस्रोपटक किसानले त्यो दाना किन्दैन । यसले दाना व्यावसायीलाई असर गर्छ ।
दोस्रो, पशुपालक किसानमा यसको असर पर्छ । ‘गुणस्तरहीन’ दाना खुवाएपछि पशुपन्छी मर्न थालेपछि पशुपालक घाटामा जान्छन् । तेस्रो, आम उपभोक्तामा पनि यसको असर पर्छ । गुणस्तरहीन वा विशाक्तयुक्त दाना खुवाएका पशुपन्छीको उत्पादन उपभोग गरे रोग संक्रमणको जोखिम हुन्छ । यसको
उपचारमा ठूलो धनराशी खर्च हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा सन्चो नहुने रोग पनि लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी असर आम उपभोक्तालाई नै पर्छ । त्यसकारण पशुपन्छीको खुवाउने दानामा सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।
सबैभन्दा पहिलो पाटो आहारा हो । पशुपन्छी बाँच्नुपर्यो । केही नखाइकन त त्यसले उत्पादन दिन सक्दैन । बाँच्नका लागि आहारा चाहिन्छ । आहारा नै पोसिलो वा गुणस्तरीय छैन भने उसको न वृद्धि विकास हुन्छ, न त प्रजनन तथा उत्पादन नै गर्न सक्छ । प्रजनन् तथा उत्पादन भएन भने त्यही ब्लक भइहाल्यो । उत्पादन भयो भने पनि गुणस्तरहीन हुन्छ । किनकि गुणस्तरहीन पदार्थ खाएपछि गुणस्तरहीन नै उत्पादन हुन्छ ।
यसबारे केही दाना उत्पादकलाई जानकारी नहुन सक्छ । केहीले जानाजान गरेको पनि हुन सक्छ । सबै मानिसहरू बदमास हुन्छन् भन्ने हुँदैन । कसैले गुणस्तरहीन चिज मिसाएर दाना उत्पादन गरेको रहेछ त्यसले पशुपन्छीलाई असर गर्छ । यस्तो दाना खाने पशुपन्छी बिरामी हुन वा मर्न पनि सक्छन् । बिरामी भएर उपचार गराउँदा खर्च हुन्छ भने मर्दा त्यसै घाटा हुने नै भयो ।
मरेको बोका वा खसीको मासु बजारबाट किनेर खाइरहेको छ भने त्यसले त झनै असर गर्ने भइहाल्यो । स्वस्थ देखिएको जस्तो भए पनि त्यो बिसाक्तयुक्त दाना खाएका पशुपन्छीले उत्पादन गरेको दुध, फुल, मासु खाँदा बिरामी हुने सम्भावना हुन्छ ।
त्यसकारण गुणस्तरीय दाना उत्पादनमा सबैभन्दा पहिले दाना उद्योग व्यावसायी जिम्मेवार हुनुपर्छ । दोस्रो, पशुपन्छी व्यावसायी पनि यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । व्यावसायीले पनि कस्तो दाना खरिद गरिरहेका छौं भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ ।
← भारतले रोकेपछि कोसेली बन्यो गोलभेंडा
उचित मूल्य नपाएको भन्दै राजधानीमा किसान आन्दोलित →
धानउत्पादनमा जापानको अनुभव र नेपालमा प्रयोग
April 5, 2014 newsagro 0
आशमुखी बन्दैंछ, ‘कृषि’
कृषिमा विष– जीवन विषाक्त हुदै